चीनले कोरोनाको प्रारम्भिक नमूनाहरू नष्ट गरिनुमा आशांका, जस कारण विश्व शोकमा छ - चीनले कोरोनाको प्रारम्भिक नमूनाहरू नष्ट गरिनुमा आशांका, जस कारण विश्व शोकमा छ -
उज्यालो प्रतिनिधि ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार फोटो समाचार
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरस र यसको संक्रमण जस्तोसुकै भए पनि चीन अहिलेसम्म सारा विश्वमा झूट बोलिरहेको छ। तर समय आइसकेको छ कि चीन मौन बस्न, जुन मानवताको बिरूद्ध सब भन्दा ठूलो झूट हो। किनभने चीनले यो स्वीकार गरेको छ कि त्यसले विश्वमा फैलिने कोरोना भाइरसको प्रारम्भिक नमूनाहरू नष्ट गरेको थियो। अमेरिकाले यो आरोप लगाएको छ कि चीनले यो गर्यो ताकि संसारले पत्ता लगाउन सकिन कि भाइरस कहाँबाट फैलियो।
जबदेखि विश्वमा कोरोना भाइरस फैलाएको छ र मानिसहरू सिकार भएका छन । धेरै देशहरूले चीनलाई यस प्रश्नको आरोप लगाउँदैछ कि चीनले जानाजानी करोडौं मानिसलाई मर्न दियो? जे होस्, संक्रमणको श्रृंखलामा पहिलो देश भए पनि चीन किन कोरोना भाइरसको प्रभावबाट छिटो उत्रन सफल भयो? चीन र कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै अनसुलझेका प्रश्नहरूको उत्तर अन्ततः फेला पारियो।
चीनले यो स्वीकार गरेको छ कि त्यसले देशभरि फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रारम्भिक नमूनाहरू नष्ट गर्‍यो। अमेरिकाले यो आरोप लगाएको छ कि चीनले यो गर्यो ताकि संसारले पत्ता लगाउन सकिन कि भाइरस कहाँबाट फैलियो।
चीनले सुरुदेखि नै कोरोना भाइरसको बारेमा आलोचना र प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको छ। अब, स्वास्थ्य अधिकारीको पछिल्लो कथनको साथ, फेरि एकपल्ट प्रश्नहरूको श्रृंखला खडा भएको छ। यस अधिकारीले देशको कोरोना भाइरस को प्रारम्भिक नमूनाहरु नष्ट भएको थियो कि पत्ता लगाएको छ। उनले भनेका छन कि यो निर्णय खतरनाक भाइरसको फैलावटको कारण बायोसेफ्टीलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञहरूको राय र अनुसन्धानपछि लिएको थियो।
अमेरिकाले लगातार चीनलाई कोरोना भाइरस फैलाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पीओले यस अघि यस देशको कम्युनिष्ट पार्टीले विश्वव्यापी महामारीको स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय पारदर्शिता रोक्दै आएको आरोप लगाएको छ। उनले आरोप लगाए कि चीनले भाइरसको नमूनाहरू नष्ट गरेको छ, जसको कारण यो कहाँबाट सुरु भयो भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो भएको छ।
चीनले दावी गरेको छ कि सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सावधानीको रूपमा नमूनाहरू नष्ट गरिएको थियो। यदि प्रयोगशालामा भाइरस भण्डारण गर्न आवश्यक अवस्था छैन भने, त्यसलाई त्यहाँ नष्ट गर्नुपर्दछ वा व्यावसायिक भण्डारण संस्थाहरूमा पठाइनुपर्दछ जहाँ यस्तो सुविधा छ, त्यस्ता नियमहरूको कडाईका साथ पालना गरिन्छ।